🥇 ▷ Maanta Hindiya waxay isku dayi doontaa degitaanka taariikhiga ah ee robotka Vikram ✅
Maanta Hindiya waxay isku dayi doontaa degitaanka taariikhiga ah ee robotka Vikram
Howlgalka Chandrayaan-2 ee Hindiya ayaa imaan doona Dayaxa maanta wuxuuna ka dhigi doonaa dhulka Vikram robot, haddii waxwalba si wanaagsan u socdaan, waa iska cadahay. AnigaRag waxay rabaan inay noqdaan qarankii ugu horreeyay adduunka ee robot dusheeda dusha sare si “xakameysan oo qumman” Hadday ku guuleysatona waxay hoos ugu dhaceysaa taariikhda iyada oo ah tii ugu horreysey ee soo gaarta ruqse guul iyo ummaddii afaraad ee Dhulka lagu gaaro.
Howlgalku wuxuu ka kooban yahay “soo degidda” by motor “15 daqiiqo oo waqtigan ah Vikram waa inuu si iskiis ah u raadsadaa caqabadaha kadibna uu qaadaa talaabooyin looga hortagayo, taas oo ah mid aad u dhib badan maxaa yeelay haddii robotku uu ku fadhiyo jaranjaro ka badan 12 digrii ama uu ku dhaco dhagax, mishiinka soo caga-dhigga ayaa halis ugu jira inuu ku dhaco, taasoo keenaysa in howshu guuldareysato.
Howlgalka Chandrayaan-2 waxaa la bilaabay July 22 ilaa iyo 20kii Ogosto ayaa galay dayax gacmeed. Markay ahayd Sebtember 2, Vikram wuxuu ka go’ay hawlgalkii socdaalka, iyo cutubka cusub ee soo degitaanka ayaa bilaabay taxaneyaal wadiiqooyin geesinimo leh si ay hoos ugu dhigaan dhismaheeda una diyaar garoobaan inay deggaan.
Illaa iyo hada howsha ma aysan diiwaan gelin dhibaatooyin. Qaanuunka loo yaqaan ‘NASA Lunar Recognition Orbiter’ wuxuu la socon doonaa saamaynta soo socota ee degitaanka, oo ay kujirto saameynta Vikram ay ku soo saarto gaasaska, gaar ahaan haddii ay ku urursadaan burburka dayaxa.
Haddii arrimahu si hagaagsan u socdaan, Vikram iyo Pragyaan, rover yar oo leh tamarta qorraxda ee ay ku wareejiso, waxay degi doontaa dayaxa meel u jirta 70 digrii koonfur, buur u dhaxaysa Manzinus C iyo Simpelius N Craters.